Siyaasi Cabdi Shuluco oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandSiyaasi Cabdi Shuluco oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Garoowe
July 22, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Siyaasi Cabdi Xaaji Yuusuf “Cabdi Shuluco”. Sawirka: Archives.
Garoowe-(Puntland Mirror) Siyaasi Cabdi Xaaji Yuusf “Shuluco” ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay shalay galab oo Khamiis ahayd duleedka magaalada Garoowe, sida ay warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyeen dhaqaatiirta caafimaadka isbitaalka guud ee Garoowe.
Shuluco ayaa shilka gaari ku galay deegaanka Buurwadal oo qiyaastii 30km dhinaca waqooyiga uga beegan magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Dhaqaatiirta isbitaalka Garoowe ayaa Puntland Mirror u sheegay in siyaasiga xaaladiisa caafimaad ay aad u fiicantahay iyadoo dhaawac kasoo gaaray faraha adimada sidoo kalena dhaawac fudud uu ka gaaray madaxa.
Siyaasi Cabdi Xaaji Yuusf “Shuluco” ayaa ah siyaasi caan ah oo aad looga yaqaan Puntland iyo Soomaaliya, sanadkii 2008- da wuxuu kamid ahaa murashaxiintii madaxtinimada Puntland, kahorna wuxuu soo noqday wasiir Puntland ah, sidoo kalena Cabdi Shuluco ayaa jagooyin sare kasoo qabtay dowladii dhexe Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Bare isagoo gaaray agaasime guud.
October 20, 2016 Baarlamaanka dowlada Puntland oo u codeeyay 11-ka xubnood ee aqalka sare